Sheringham oo kula taliyay Rashford inuu isaga Tago Man Utd haddii uu sii joogo Mourinho | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA CAALAMKA - Sheringham oo kula taliyay Rashford inuu isaga Tago Man Utd haddii uu sii joogo Mourinho
TEDDY SHERINGHAM ayaa soo jeediyay in Marcus Rashford uusan horumar ku gaari doonin la shaqeynta tababare Jose Mourinho haddii uu doonayo horumarna waa in uu dhaqaaqo sida uu sheegayo halyeeygii Man Utd.
Manchester United weeraryahankeedu, waa 20-jir, wuxuu Fursadihiisii waayay markii kooxdu ay soo qaadatay Alexis Sanchez BishiiJanuary.
Kulamo 18 ah ayuu ciyaaray tan iyo Imaatinkii Sanchez iyadoo FA Cup kulan ay kooxdu la ciyaartay oo ahaa midkii ay wajaheen Yeovil bishii January 26-keeda keddib uu maqnaa laacibkaas, Rashford wuxuu ilaa markaas safka koobaad helay 4 kulan.
Ninka Seddaxda Koob halka mar kula guuleystay Man Utd ee Sheringham wuxuu ku boorriyay Rashford inuu isaga tago Kooxda.
Isagoo hadlayay kana hadlayay Sky oo uu Falanqeeye ka yahay United kulankii ay 0-0 kula garab dhacday West Ham Habeen hore, Sheringham wuxuu yiri: “Waxaan ka dhahayaa Marcus Rashford wuxuu u baahanyahay inuu ciyaaro.
“Waa inuu kooxdan ka helaa Fursad Safasheed, haddii kalena uu kooxda isaga tago oo uu raadsado inuu Safto.